arimaha bulshada | BanaadirTimes.com
Akhriso: Wasaaradda arimaha gudaha oo War-saxaafadeed ka soo saartay Xariga Siyaasiga C/raxmaan Cabdi shakuur
DEG DEG: Dowladda oo sheegtay in C/raxmaan cabdi shakuur uu yahay Dambiile maxkamadna la horgeyn doono
Afayeenka Wasaaradda amniga Soomaaliya Cabdi Casiis Cali Ibraahim “Xildhibaan” oo goor-dhaw Shir jiraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in Ciidamada amaanka Soomaaliya ay weerarkaasi fuliyeen Islamarkaana ay watayn warqad ruqsad soo qabasho ah Cabdi raxmaan Cabdi Shakuur Warsame. Afayeenka ayaa sheegay in C/raxmaan C/shakuur Gurigiisa laga hago dabin ama qiyaano Dowlado Shi-sheeye la damacsan yihiin Soomaaliya waxa uuna sheegay ...
Dowladda soomalia oo baadi goobeysa dukumiintiyo lagu dumin rabay dowladda
Warar soo baxaya ayaa waxa ay sheegayan in dowladda soomalia ay baadi goobeyso Dukumiintiyo la sheegay in lagu qal qal galinaayay dowladda. Nuqullo kamid ah Dukumiintiyadaasi waxaa laga helay guriga Siyaasiga Cabdi Raxmaan Cabdi Shakuur oo xalay dowladdu weerar ku qaaday. Ciidamo badan ayaa buux dhaafiyay guryaha muqdisho ay ka daganyihiin siyaasiyiinta iyo xildhibaanada mucaaradka ah waxaana wararku sheegayan in ...
Madaxweyne Farmaajo oo Wasaaradda gaashaandhigga kulan kula leh saraakiisha xoogga dalka
BREAKING: Madaxweyne Farmaajo oo Hadda gaaray xarunta wasaaradda gaashaandhigga ayaa waxa uu kulamo kula leeyahay saraakiisha xoogga dalka. Ammaanka xarunta wasaaradda gaashaandhigga ayaa aad loo adkeeyay waxaa ka xiray dhamaan waddooyinka soo gala xarunta Booqashada Madaxweynaha uu ku tagay Xarunta Wasaaradda Gaashaandhigga ayaa ku soo aaday, maalmo kaddib markii Mareykanka uu ku dhawaaqay inuu joojiyay gargaarkii uu siin jiray Ciidamada, ...
Xildhibaanada iyo Siyaasiyiinta Beesha uu ka dhashay C/raxmaan Cabdi Shakuur oo Kulamo xasaasi ah ka wada muqdisho
Xiisad siyaasadeed oo kacsanaan ah ayaa maanta waxa ay ka jirta magaalada caasimadda ah ee muqdisho kadib weerarkii xalay lagu qabtay siyaasiga C/raxmaan Cabdi shakuur. Kulamo is daba joog ah ayaa waxa ay hadda ka socdaan hotelada muqdisho kaasi oo ay ku yeelanayan xildhibaanada beesha uu ka dhashay siyaasiga ay dowladda xirtay. Kulanka ugu weyn waxa uu hadda ka socdaa ...
Xisbiga Wadajir oo Si Kulul u Cambaareeyay Werarkii lagu qaaday Hooyga C/raxmaan Cabdi shakuur laguna xiray Siyaasiga
Xisbiga Wadajir oo ka mid ah Xisbiyada siyaasadda ee dhowaan is-diiwaan geliyay ayaa si kulul u cambaareeyay weerar xalay Ciidamada Ammaanka ee NISA ku qaadeen Guriga Siyaasiga C/raxmaan C/shakuur Warsame oo ah Hoggaamiyaha Xisbiga. Guddoomiyaha xisbiga Wadajir Kamaal Guutaale, ayaa cambaareeyay xarigga siyaasi C/raxmaan C/shakuur oo kamid ah aas aasayaasha xisbigaasi. Guutaale ayaa sheegay in wax lala xumaado ay tahay ...
Akhriso: Xildhibaanno iyo siyaasiyiin Oo dowladda Farmaajo uga digay bur bur iyo dagaal sokeeye
Xildhibaan C/qaadir Cosoble Cali oo ka mid ahaa Musharaxiintii u tartantay xilka Madaxweynaha, ahna Xildhibaan ka tirsan Golaha shacabka ayaa si weyn uga soo hor-jeestay tallaabadii xalay Ciidamada ammaanka ku weerareen guri uu degenaa C/raxmaan C/shakuur. Xildhibaan C/qaadir Cosoble ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku sheegay wixii xalay dhacay in aan la aqbali karin. “In qof siyaasad kugu ...
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa Axadi maanta sheegay in Dowladiisu rajeyneyso in ay safaarad ka furato caasimada Falastiin ee Bariga Qusus, mustaqbalka. Wuxuu sheegay in Bariga Qudus ay hadda heysato Israel sidaasi daraadeedna aysan ka furan karin wax safaarad ah, balse ay rajeynayaan in ay soo dhawaatay maalmihi ay sida rasmiga ah u furan lahaayeen safaaradooda Falastiin. Hadalkaan ayaa ...
Ciidamada ammaanka oo saakay howlgallo baaritaanno ah ka wada magaalada muqdisho
Ciidamada ammaanka dowladda ayaa saakay baaritaanno ka wada qeybo kamid ah magaalada muqdisho waxaana xiran waddooyin muhiim ah. Goobaha xiran ee baaritaanada ay ka socdaan waxaa ka mid ah Agagaarka Garoonka Diyaaradaha Magaalada Muqdisho,Zoobe iyo Xaafadda Taleex ee Degmada Hodan. Howlgalladaan ayaa kusoo beegmaya iyadoo xalay ciidamada NISA weerar qorsheysan ay ku qaadeen guriga uu muqdisho ka daganyahay siyaasiga cabdi ...
Xogta Weerarkii Xalay lagu qabtay C/raxmaan Cabdi Shakuur iyo Cida ka dambeysay.
YAA WEERARAY SIYAASIGA ? Ciidamo si gaar ah u tababaran oo ka tirsan NISA ayaa xalay saqdii dhexe weerar qorsheysan ku qaaday guri uu dagmada wadajirka daganyahay siyaasiga cabdi raxmaan cabdi shakuur warsame oo kamid ah siyaasiyiinta mucaaradka ah. Ciidamada ayey ku qaadatay muddo 10 daqiiqo ah in ay gudaha u galaan guriga siyaasiga mucaaradka ah waxaana ay ku guuleysteen ...